OpenDrop, iyo yakavhurwa sosi analog yeApple's AirDrop | Linux Vakapindwa muropa
Seemoo Lab, rabhoritari yekutsvagisa yakanangana nenhare dzakachengeteka, hyakagadzira OpenDrop, yakavhurwa sosi kuitiswa kweApple's AirDrop chimiro. AirDrop chinhu chakagadzirwa naApple kuchinjana zvemukati neimwe padhuze Mac, iPhone, iPad kana iPod touch kuburikidza neiyo Finder kubva File Manager pane Mac OS masisitimu kana Control Center pane iOS masisitimu.
Iyo AirDrop ficha yakaonekwa muMac OS X v10.7 Shumba, asi swaps zvaigoneka chete pakati peMac.AirDrop yakaonekwa pane iOS kubva pachinomwe kuburitswa. Yakanga isiri kusvika iOS 8 uye OS X Yosemite kuti iko kuchinjana pakati peMac OS neIOS kwaigona kuitwa.
AirDrop inobvumira vashandisi kugovana ipapo ipapo mapikicha, mavhidhiyo, zvinyorwa nezvimwe mafaira ane Apple padhuze zvishandiso kuburikidza neBluetooth neWi-Fi.
1 Nezve OpenDrop
2 Maitiro ekuisa OpenDrop paLinux?
OpenDrop chiraira chemutsetse chishandiso chinobvumidza kugovera faira pakati pezvigadzirwa zvakananga kuburikidza neWi-Fi. Hunhu hwayo Chinhu chega ndechekuti inotsigira Apple AirDrop protocol, iyo inokutendera iwe kugovana mafaera neApple zvishandiso neIOS uye macOS.
Kuchengetedza kuenderana neApple AirDrop, OpenDrop inoda iyo yekumusoro chikuva kutsigira yakatarwa yeWi-Fi yekubatanidza rukoko.
Zvakare, inoda Python 3.6 kana gare gare, pamwe nemamwe maraibhurari akasiyana siyana. AirDrop inomhanya chete paApple Wireless Direct Link (AWDL), asi OpenDrop inongotsigirwa paMac OS kana Linux masisitimu anomhanyisa yakavhurwa sosi yekumisazve AWDL senge OWL.
Iyo peculiarity ndeyekuti inowirirana nezvibvumirano zvinoshandiswa neAirDrop, iyo inobvumidza kugovana mafaera neApple zvishandiso neIOS neMac OS.
Saka zvinowirirana chete neApple zvishandiso zviri mune dudziro isina muganho nevamwe vashandisi, sezvo dudziro yekusarudza yemidziyo uye kutumira kuburikidza nebhuku rekero kunoda kupihwa chitupa cheApple siginicha yedhijitari.
Padanho reprotocol, kuiswa kwacho kunoenderana zvizere neApple zvishandiso, inobvumidza iwe kuronga kusangana kweLinux-based masisitimu ane iOS uye macOS zvishandiso.
Kunyangwe OpenDrop iri sarudzo, ichine zvishoma zvishoma, zvatinga taure zvinotevera:
Mac OS uye iOS inogashira inogoneswa kuburikidza neBluetooth Low Energy (BLE): Apple zvishandiso zvinotanga yavo AWDL interface uye AirDrop server chete mushure mekugamuchira yakasarudzika posvo kuburikidza neBLE. Izvi zvinoreva kuti Apple AirDrop vanogamuchira vangangodaro vasina kuwanikwa kunyangwe munhu wese achigona kuzviwana;
Sender / Anogashira Kusimbiswa uye Nzvimbo Yekubatanidza: Parizvino, hapana peer-kune-peer kuvimbiswa senge kuAirDrop.
OpenDrop haionesi kuti chitupa cheTLS chakasainwa neApple mudzi uye kuti rekodhi yeApp ID yechokwadi ndeyechokwadi. Zvakare, OpenDrop inogamuchira yega yega mafaera aanogamuchira nekuda kwenzvimbo yekushaikwa yekubatanidza;
tumira akawanda mafaera: AirDrop inotsigira panguva imwe chete kutumira mafaera mazhinji, kusiyana neOverDrop.
Nekuda kweizvozvo, tinogona kuona kuti haisati yaenderana nemabasa ese eAirDrop kana inogona kunge isingawirirane neshanduro dzemberi dzeAirDrop.
OpenDrop yakagadzirirwa zvizere muPython uye yakaburitswa neSeemoo Lab pasi peGNU General Public License v3.0.
Maitiro ekuisa OpenDrop paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa OpenDrop pane yavo Linux kugovera pUnogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
OpenDrop inogona kuiswa nerubatsiro rwePython package package (PIP), Kuisirwa nenzira iyi kunogona kuitwa nekuvhura terminal pane yako system uye uchinyora unotevera kuraira pairi:
Imwe nzira yekuisa iyi package ndeye kurodha pasi kodhi yeizvi uye nekuisa iyo package neyaka dhawunirodwa.
Isu tinoita izvi kubva kuchiteshi nekutaipa:
Uye voila, kuti udzidze nezvesarudzo dzekushandisa unogona kuita iwo wekuraira:
Kana iwe unogona kushanyira chinotevera chinongedzo kudzidza zvakawanda nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » OpenDrop, iyo yakavhurika sosi analog yeApple's AirDrop